Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galay xuska munaasabadda1-da Luulyo+SAWIRRO - Hargeele - Wararka Somali State
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galay xuska munaasabadda1-da Luulyo+SAWIRRO
Muqdishi(SONNA)Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu xusayey 60-guurada ka soo wareegtay Xornimada Gobolada Koonfureed iyo Midnimada dalka ee 1-da Luulyo.
Madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka kaddib munaasad Calan-saar ah oo ka dhacday Xarunta Madaxtooyada Qaranka.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta jeedin doona, khudbadda munaasabadda 1-da Luuliyo haddii Alle idmo.
Munaasabadda ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha golaha Shacabka,Ra,iisul wasaare ku xigeenka dalka,Guddoomiyaha Maxkamadda sare,Guddoomiyaha gobolka Banaadir, qeybaha bulshada iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda.
Akhriso nuxurka kulankii dhexmaray R/wasaaraha XFS & ku-xigeenka R/wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar
Madaxweyne Farmaajo iyo Erdogaan oo ka wada hadlay hannaanka iskaashiga labada dal ee Covid 19
Madaxweyne Farmaajo oo u safray dalka Ereteriya.